राजनीति Archives - Bigul News
शनिबार, ०२ भदौ २०७५
नेका (विपी) र एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) एक हुने
बैशाख १४, २०७५ Sabin Timilsina
काठमाडौँ, १४ वैशाख, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको समाजवादलाई आदर्श बनाएर नेपाली काँग्रेस(विपी) र एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) को चाँडो एकता हुने भएको छ …
प्रचण्डले आफु प्रधानमन्त्री बन्ने बारे गरे यस्तो खुलासा
फागुन ०२, २०७४ NK-Bigul Media
चितवन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताको विषय बुधबारसम्ममा टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले पार्टी एकताको विषयमा भोलिसम्म टुङ्गो लाग्ने …
ओलीको रु २४ लाख र सिटौलाको रु २३ लाख निर्वाचन खर्च !
बनियानी, झापा, १८ पुस । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका चार नेतासहित ३० जनाले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन् । गत मंसिर २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ५७ …
महिनादिनमै ४/४ पटक मूल्यवृद्धि: विरोधमा उत्रियो अनेरास्ववियू, आजै दिउँसो १ बजे मुर्दा जुलुस !
काठमाडौं, १८ पुस । देशकै पहिलो पार्टी नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बिरोधमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमले हिजो मात्रै महिनादिन पनि नवित्दै चौथोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको हो । …
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरामी : बालकोटमै आराम गर्दै !
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरामी परेका छन् । अध्यक्ष ओलीको निजी सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबारदेखि ओली झाडा पखालाले ग्रस्त भएका हुन् । विरामीका कारण अध्यक्ष ओली हिजो (सोमबार) …
बैतडीमा तीन जना उम्मेदवारले मात्रै खर्च विवरण बुझाए
बैतडी, १७ पुस । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बैतडीका १२ उम्मेदवारमध्ये तीनजनाले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेका छन् । निर्वाचनको मतपरिणाम प्रकाशन भएको तीन …
प्रस्तावित पाँचौं ‘राष्ट्रिय पोशक दिवस’ विशेष समारोहका केहि झलक (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । प्रस्तावित पाँचौं ‘राष्ट्रिय पोशक दिवस’ को अवसरमा “हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान, राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियान” भन्ने मूल नाराकासाथ श्रद्धावान नेपालीले राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोह कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। राजानन्द माण्डव्यको अध्यक्षतामा …
जनादेशलाई लत्याएर सरकार बन्न नदिनुले अनेक आशंका जन्मायो – नेता नेम्बाङ
दमक, १७ पुस । नेकपा (एमाले)का नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रदेश र संसद्को निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई वर्तमान सरकारले मार्गप्रशस्त गरेर सरकार निर्माण गर्न औपचारिकता दिनुपर्ने औँल्याएका छन् । झापाको दमकमा आज बिहान …
उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन आयोगको निर्देशन
काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको खर्च तत्काल बुझाउन आयोगले उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७२ को दफा ७२९४० अनुसार निर्वाचनको परिणाम प्राप्त …
यी हुन १३ दलका २ सय २० समानुपातिक सांसद (सूचीसहित)
काठमाडौँ । १३ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यका २२० उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले शनिवारबाटै ती नामावलीको छानबिन थालेकाे जनाएको छ। सात प्रदेशमा समानुपातिकतर्फको कुल २२० सिटमा …